Baarlamanka F. S. oo ansixiyay sharciga isgaarsiinta Qaranka | Baydhabo Online
Baarlamanka F. S. oo ansixiyay sharciga isgaarsiinta Qaranka
Kulanka Xildhibaanada golaha Shacabka waxaa shir gudoominayay Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka C/wali Sheekh Ibraahim ‘’Muuddeey’’ ,waxaana kulanka uu ku saabsanaa Akhrinta 3-aad ee Hindise sharciyeedka Isgaarsiinta Qaranka, qeybinta soo jeedin ku saabsan su’aal oraaheed ku saabsan dhaqanka sharciga LR 112 Shaqada Arimaha Dibadda iyo sidoo kale qeybinta warbixinnada deegaan doorashooyinka.
Ugu horreyn Gudoomiyaha guddiga warfaafinta ,wacyi gelinta Boostada iyo Isgaarsiinta ee golaha shacabka Xidlhibaan Qaalid Macow ayaa sheegay in sharciga isgaarsiinta Qaranka lagu soo daray dhamaan talooyinkii ay soo jeediyeen Xildhibaannada Akhrintiisii labaad, wuxuuna ka codsaday xildhibaannada golaha shacabka ayaa in ay sharcigan ansixiyaan maaddaamaa dalka uu muhiimad gaar ah u leeyahay.
Qaar ka mid ah xildhibaannada Golaha shacabka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in sharcigan uu waqti badan qaatay loo baahanyahay in la ansixiyo.
Intaasi ka dib Xildhibaannada golaha shacabka ayaa cod geliyay sharciga isgaarsiinta Qaranka ,waxaana ogolaatay 158,mudane iyadoo uu diiday hal mudane mana jirin cid ka aamustay sida uu shir guddoonka ku dhawaaqay.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyada ee Dowladda Soomaaliya iyo Gudoomiyaha gudiga warfaafinta, wacyi gelinta Boostada iyo Isgaarsiinta ee golaha shacabka Xidlhibaan Qaalid Macow ayaa uga mahad celiyay xildhibaannada golaha shacabka sida ay codka kalsoonida ah u siiyeen sharcigan.
Ajendaha ugu dambeeya ee golaha shacabka oo ahaa warbixinnada deegaan doorashooyinka ayaa loo gudbay waxaana Xildhibaan Daahir Cabdi C/llaahi Dr. Go uu xildhibaannad ka hor jeediyay warbixin ku saabsan deegaan doorashadiisa iyo xaaladaha deegannadaasi.
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka C/wali Sheekh Ibraahim ‘’Muudey’’ oo kulanka soo xiray ayaa u mahad celiyay guddiga golaha shacabka oo ansixiyay sharciga isgaarsiinta Qaranka, wuxuuna sidoo kale bogaadiyay Xildhibaannada Warbixinnada ka keenay deegaan doorashooyinkooda.